MediaLight ပွင့်လင်းသေတ္တာများ - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
ပင်မစာမျက်နှာ MediaLight ပွင့်လင်း Box ကိုအရောင်းအဝယ်
MediaLight ပွင့်လင်း Box ကိုအရောင်းအဝယ်
မူလစျေးနှုန်း $32.95 - မူလစျေးနှုန်း $99.95
မူကွဲတစ်ခုကိုရွေးပါ MediaLight Mk2 - 1 မီတာနေကြတ်ခြင်း - $19.95 MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း - $2MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း - $3MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း - $4MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း - $5MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း - $6MediaLight Desk Lamp မှ Ideal-Lume Pro ကို - ဒေါ်လာ ၇၉.၉၅
MediaLight Mk2 - 1 မီတာနေကြတ်ခြင်း။ MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း MediaLight စားပွဲတင်မီးအိမ်မှ Ideal-Lume Pro ကိုထုတ်လုပ်သည်
ဤစာမျက်နှာတွင်ရောင်းချသော Mk2 ယူနစ်အားလုံးသည်စမ်းသပ်ယူနစ်ဖြစ်သည်။ တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်ပုံးတစ်လုံးစီမှကျပန်းယူနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်သည်။ ဤအရာများသည် ဖောက်သည်ပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ဘောက်စ်ပေါ်ရှိတံဆိပ်ကို MediaLight ဝန်ထမ်းများမှ ကျိုးသွားပါသည်။ (မှတ်ချက်- အသွားအလာတွင် စွန်းထင်းနေသော သို့မဟုတ် ကွဲသွားပါက၊ ၎င်းတို့ကို ဦးစွာ စမ်းသပ်လေ့ရှိသည်)။
သင်၏ပုံစံကိုပွင့်လင်းသော box တစ်ခုအဖြစ်မထားရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အသစ်ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည် LX1 ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်။ အဆိုပါ LX1 ဖျက်ဆီး CRI 1၊ ISF အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အစွန်းရောက်တိကျမှုတို့ဖြင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေး (MediaLight ၏ ၁/၃ ဈေးနှုန်း) မှအရာအားလုံး။
ငါတို့သည်လည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဖောက်သည်ပြန်အခြိနျမှနျမှရောင်းချ။ ထိုယူနစ်များကိုသူတို့၏ထုတ်ကုန်အမည်ဖြင့် [Refurb] အဖြစ်မှတ်သားမည်။
ပွင့်လင်း box ကိုယူနစ်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ပွင့်လင်းသောယူနစ်များနှင့်အတူတူပင်5နှစ်အာမခံထည့်သွင်းပါ
ကောင်းသော - အဖြစ် - အသစ်သောအခြေအနေ၌ရှိကြ၏
ပွင့်လင်းသေတ္တာတစ်ခုဝယ်ယူလျှင် "အသစ်ယူနစ်" တစ် ဦး ချင်းစီထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ကိုကိုးကားပါ။ ပွင့်လင်း box ကိုယူနစ်တိုင်းလမ်းအတွက်တူညီသည်။ အကယ်၍ စင်း၏ကပ်ကော်ကိုအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ပွင့်နေသောသေတ္တာတစ်ခုအဖြစ်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ MediaLight ဘက်လိုက်မှုသာ“ အသစ်စက်စက်” အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
MediaLight ကို ၀ ယ်ပြီးနောက်သင်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်သည်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ တစ်နှစ်တာအရာအားလုံးလွှမ်းခြုံထားသည်” အာမခံချက်ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၅ နှစ်ထက်ကျော်လွန်သည်။
ဖမ်းမိကဘာလဲ? သင့်အိမ်နှင့်ရုံးခန်းရှိတီဗီတိုင်းတွင်မီးထွန်းရန်အတွက်အလင်းရောင်များထပ်မံထည့်ရန်ပြန်လာမည့်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်သင့်အားပျော်ရွှင်စေလိုပြီးသူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ကိုပင်ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မည်။
5.0 35 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ.
ပို့ဆောင်မှုအလွန်မြန်ဆန်ခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်သည်လက်တွေ့အသစ်ဖြစ်သည်။ ၄ မီတာဗားရှင်းသည်အလင်းပြင်းအားပေါ် မူတည်၍ usb4port အတွက်ပါဝါအနည်းငယ်သုံးနိုင်သည်။
MediaLight Mk2 - ၂ မီတာဗားရှင်း
4m strip သည် 500mA အတိအကျနီးပါးသုံးသည်၊ များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။ သို့သော် WiFi dimmer သည်ဆွဲအားကိုအနည်းငယ်တိုးစေသည်။ အထူးသဖြင့် Panasonic OLED range မှာရှိပြီးသား display range နဲ့ပြသနာတစ်ခုပဲဆိုတာငါတို့သိပါတယ်။ အဲဒီပြကွက်တွေမှာသူတို့ကသတိပေးချက်ကို ၁၀၀%ပြလိမ့်မယ်။ Panasonic OLED ပေါ်တွင်မီးလုံးကို ၁၀၀% သုံးလိုလျှင် dimmer ကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြုတ်။ dimmer level ကို ၉၀% အောက်မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ display သည်အခြားထုတ်လုပ်သူထံမှဖြစ်သည်၊ ငါတို့အဲဒါကိုစစ်ဆေးနိုင်အောင်ငါတို့သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူး!
ကျွန်ုပ်သည် MK2 စနစ်ကိုအဖွင့်သေတ္တာတစ်လုံးအဖြစ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ပေါ်လာသည်။ ထုတ်ကုန်ကိုယ်တိုင်ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါ့မှာ Vizio OLED 65” တစ်လုံးရှိပြီးမှောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာပုံကိုသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတယ်။
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ တောက်ပမှုအဆင့်ကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုနှစ်သက်သည်၊ ၎င်းသည်အဝေးမှဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှု။ MediaLight နှင့် Vizio soundbar remote ကြားတွင်စကားပြောရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုသည်စကားပြောစကားပြောပြဿနာကိုဖယ်ရှားရန်မျှော်လင့်ထားသောအခမဲ့အစားထိုးအဝေးထိန်းစနစ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ငါအိမ်နဲ့ဝေးတာမို့အဝေးထိန်းအသစ်မတပ်ဆင်ရသေးပါ။
အလွန်ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်၊ တပ်ဆင်မှုသည်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုစီစဉ်ရန်နှင့်ဂရုတစိုက်ကပ်ရန်အချိန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်တိပ်ကိုကိုင်ထားခြင်းနှင့်ပြဿနာများမကြုံခဲ့ပါ။ အဝေးထိန်းလက်ခံသူသည်အချက်ပြလက်ခံနိုင်သည့်နေရာ၌ထားရမည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုတီဗီ၏အနောက်ဘက်အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်နေရာချခြင်းဖြင့်ထိုပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုပြီးအထင်ကြီးလို့မရဘူး။
ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အသွေး
Media Light တွင် Jason နှင့်ဆက်ဆံသောအခါဤအရာသည်သင်မျှော်လင့်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ သင်သည်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုလိုချင်။ အစွမ်းကုန်လေးစားမှုနှင့်ဆက်ဆံပါ၊ စျေးကွက်အတွင်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုကျော်တက်နိုင်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်သင်သည် Media Light တွင်ဂရုစိုက်ခံရလိမ့်မည်ဟုသင်အပြည့်အ ၀ ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ငါ Jason ထံမှဘက်လိုက်မှုအလင်းကိုမှာကြားခဲ့ပြီးငါ့ထုတ်ကုန်ကိုနှစ်ပတ်နီးပါးလက်ခံမရခဲ့ပါ။ ငါပေးပို့တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသိဖို့ Jason ကိုသိဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကိုသူစစ်ဆေးပြီးချက်ချင်းငါပျောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုငါ့ကိုနေ့ချင်းညချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကသူ (သို့) သူ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အပြစ်တစ်ခုမှမဟုတ်တာ၊ ဒါပေမယ့်သူကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကိုကိုင်တွယ်ဖို့ငါ့ကိုပြောနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူကမှန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီတွေအများကြီးမရှိတဲ့အခါငါ Jason နဲ့သူ့ကုမ္ပဏီကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပုံကိုငါအံ့သြသွားတယ်။ ငါရရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငါပိုပြီးမပျော်နိုင်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့ OLED TV ကိုဘက်လိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့ဘက်လိုက်မှုကဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲ။ ကြိုက်တယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Jason !!